मानव सर्वश्रेष्ठताको मुकुट उतारौं - Purwanchal Daily
आफूलाई बुझ्नुको सार आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नु हो । हाम्रो दायित्व सिंगो पृथ्वी र प्रकृतिमा रहेका वनस्पति र प्राणीहरु प्रति हुनु पर्छ । हामी सर्वश्रेष्ठ हौं कि निच ? हाम्रो दायित्व कहाँ चुक्यो र हामी कुन दर्जामा छौं– हामी आफ्नो समिक्षा गरौं ।
मानिसको सर्वश्रेष्ठताको मापन केही आविस्कार, खोज अनुसन्धान र उसले बाँचेको जीवनबाट मात्र गर्न सकिन्न । मानिस आफूलाई चेतनशील ठान्छ र यही ढोंगमा आफ्नो इतिहास पर्गेल्छ । र, आफूले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ भएको डंका पिट्छ । तर, म ठान्छु कि मानिसले गरेको कल्याणकारी, प्रकृतिमैत्री, पृथ्वी संरक्षक व्यवहारले ऊ सर्वश्रेष्ठ हो कि निच निधो हुन्छ । उसो भए हामी के हौं ? जवाफ खोजौं र समाधान निकालौं ।
प्राणीहरु एक–अर्काको सिकार गरिरहेकै छन् । तर, हामी मानिसले हाम्रो पूर्वज पेरोलापिथेकस हुँदै मानव जीवनमा पर्दापरण गरेको चालिस लाख बर्षयता आफू आफू लडाइँ गरेर कति नरसंहार ग¥यौं ? कति प्राणीहरुको हत्या ग¥यौं ? हामी सँगै दौड लगाएर यहाँसम्म आइपुगेका असंख्य प्राणी हामीले पैदा गरेको प्राकृतिक प्रतिकूलताको कारण लोप हुँदै गइरहेका छन् । यो पृथ्वीमा १४ करोड बर्षसम्म राज गरेर बसेको डाइनासोरको पनि अन्त्य भयो । कारण अर्कै बन्ला, तर हामी मान्छेले गरेको प्राकृतिक विद्रुपीकरणले विनास अवश्यम्भावी छ । हामी विनासक भएका छौं ।
धर्मको पाखण्डले विज्ञानलाई कालो बर्को ओडाएको छ । मानिस बाहेक प्रकृति उपभोग गरिरहेका कैयौं जीवलाई धर्मले तुच्छ, नीचको रुपमा मानिसको दिमागमा भरिदिएको छ । अर्को जुनी वा जन्म (पुनर्जन्म) विभिन्न जनावार समूहमा जन्म लिने जस्ता बकवास हाम्रा मगजमा भरिएका छन् । मानिस आफू र आफ्नो समुदायभन्दा अरुमा जीवन देख्दैन । मान्छेलाई धर्मले पुँजीवादी लुटेराहरुको गुलाम बनाइदिएको छ । धर्म नामको आध्यात्मिक चेतना उन्नत मानवीय सभ्यताको महादुश्मन हो । जसका उपासकहरु पृथ्वीका विनासक हुन् ।
मान्छे हुनुको अहंकार सँगै धनी शक्तिशाली बन्नुको अर्को गौरव र घमण्ड पुँजीवादी राजनीतिले पैदा गरेको छ । र, त्यो राजनीतिले पैदा गरेको वर्ग र त्यहाँभित्रका पनि खास विशिष्ट भनिएकाहरु गरीब र सिमान्तकृतहरुलाई मान्छे मान्न चाहिरहेका छैनन् । यो यथार्थ सत्य हो । आफ्नो राज्यको भ्रमणपछि रानी एलिजावेथले भनेकी थिइन्– ‘जतासुकै कंगालहरु थिए, घुमन्ते दरिद्रहरु थिए ।’ आफूलाई सत्ता मान्ने सामन्तवादी, पुँजीवादीहरु गरीब वर्गलाई मान्छे मान्न तयार छैनन् भन्ने यो एउटा सानो दृष्टान्त हो ।
हामी यस्तो समय र समाजमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ साँचो कुरा बुझेपछि मानिस हुनुमा लज्जा हुन्छ । हामी आफूले आफैलार्ई थुक्न पुग्छौं– मानिस भएकोमा । मानव इतिहासका कैयौं नकारात्मकताका भागिदार हामी पनि हौं । त्यसैले पृथ्वी, प्रकृति र सम्पूर्ण जीव दुनियालाई पिरोल्नुमा हामी पनि जिम्मेवार छौं । हामीले यताबाट पनि हेर्नु पर्दछ । र, हाम्रो जीवनबाट दुनियालाई बचाउने दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
हामीले नबुझेको हो कि, बुझेर पनि बुझ पचाएका छौं ? प्रश्न आफैंलाई गरौं । किनकि सिंगो प्रकृतिमा हामी सबै एकअर्कामा अन्तर्निर्भर छौं, अन्तर्घुलित छौं । रुख बिना हामी र हामी बिना रुखहरु पनि बाँच्न मुस्किल पर्दछ । रुख सिंगो पृथ्वीमा अधिक महत्वपूर्ण छ जीवनका लागि । हामी यति बिघ्न रुख काटिरहेका छौं, हाम्रा साधारण आवश्यकता र कुत्सित स्वार्थहरुको निम्ति सिंगो पर्यावरणलाई ध्वस्त पारिरहेका छौं । आफ्नो मानिस भएको घमण्डलाई एकछिन विश्राम दिएर हाम्रो भोलि अर्थात् भावी पुस्ताको बाँकी जीवनप्रति यति ठूलो गद्दारी नगरौं ।
यतिबेला कार्वनउत्सर्जनको कारण तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । छिट्टै नै यही तापक्रमको कारण हिम पहाडहरु पग्लने छन्, समुद्रको सतह माथि आउने छ । जसकारण समुद्र तटीय क्षेत्रमा रहेका न्युयोर्क, लण्डन, मुम्बई, कलकत्ता, सानफ्रान्सीस्को, आमस्टडर्म लगायतका विश्वका कयौं शहरहरु समुद्रमा डुब्ने छन्, इतिहास बन्ने छन् ।
रुखहरुको बिनासको कारण पर्यावरणमा आएको ठूलो संकटले मानव जातिमा खानेपानीको हाहाकार हुने स्थिति छ । यतिबेला हामीसंग रहेको करिब ७ अर्व जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने खानेपानीको आपूर्ती गर्न असमर्थ भइरहेका छौं । विश्वको झण्डै आधा जनसंख्यालाई पिउने पानीको आपूर्ती गर्न सकिरहेको हिमालय हामीले गरेको तीव्र प्राकृतिक दोहनको कारण सन्तुलन गुमाउँदै गइरहेको छ । भविष्यमा यो एउटा भयानक समस्या बनेर हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनेछ । पिउने पानीको अभावमा दुनियाँ छटपटाउँदै मर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हाम्रो यो प्रकृतिविरुद्धको तीव्र हमलाले कृषि तथा जीवजन्तुको लागि चरन र बसोबासको क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ । कयौं वनस्पतिहरु लोप भइरहेका छन् । कयौं प्रजातिका प्राणीहरु लोप भइरहेका छन् । हामी आफ्नो अह्मता र मान्छे हुनुको घमण्ड साँधेर आफ्नो कृतिम वैभवताको लागि ठूलो भयानक अपराध गरिरहेका छौं ।
प्रकृतिको मरुभूमिकरण, नाफाको लोभमा तीव्र उत्पादनको लहड, पुँजीवादी लुटको निकृष्ट चरित्रको कारण प्रकृतिको दुश्मनको रुपमा पुँजीवादले हामी सबैलाई उभ्याउँदैछ । सर्वश्रेष्ठताको पाइजामा लगाई दिएर पुँजीवाद हामी सबैलाई आफ्ना कर्तुतहरुको भागीदार बनाइरहेको छ । हामी के हौं ? हामी के भइरहेका छौं ? जवाफ हाम्रो अगाडि छ ।
हामी आफूलार्ई सर्वश्रेष्ठ भएको कथित दाबी गर्छौं । तर, हामी मानव जाति अत्यन्तै तुच्छ, निकृष्ट, हत्यारा भएका छौं । त्यसैले हामी मानवबाट अमानव बन्दै गइरहेका छौं । जसरी प्रकृतिको यति बिघ्न दोहन, यति हानी भइरहेको छ के यो कुनै अमूक जनावरले ग¥यो ? आजसम्म मानव बाहेक यो पृथ्वीलार्ई यति ठूलो चोट कसैले पु¥याएको छैन । जसको कारण उत्पन्न भयानक पर्यावरणीय संकटको मार सिंगो प्राणी जगतले भोग्न बाध्य छ । कोभिड–१९ जस्तो महामारी हामी यतिबेला भोगिरहेका छौं, कयौं यस्ता महामारी भोग्दै आइरहेका छौं । कयौं संकटहरु उत्पन्न भएका छन् । के हामी अझै घमण्ड गर्छौं ? हामी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठानेर अझै अन्धो बन्छौं ?
हामी मानवजाति यस्ता छौं कि २०औं खर्ब डलर युद्ध प्रविधि, अमानवीय युद्ध र जनदमनमा खर्च गरिरहेका छौं । हामीलार्ई हाम्रो कृतिम वैभवको चिन्ता छ । तर, बर्षमा दुई करोडभन्दा बढी मानिस कुपोसित र खान नपाएर मरिरहेका छन् । प्रतिमिनेट करिब सयौं जना बालबालिका खान नपाएर मरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ हामी अभिमानी कथित सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिसप्रति मिनेट अर्बौं रकम सार्वजानिक कोषबाट सैनिक खर्चमा लगाइरहेका छौं ।
हामीलार्ई जीवनको कुनै पर्वाह छैन । हामी पछिल्ला १०० बर्षहरुमा यहाँसम्म आइपुग्यौं कि हामीले हिजोको लाखौं बर्षको इतिहास पनि बिर्सिसकेका छौं र भोलिप्रति पूर्णरुपमा अन्धो बनेका छौं । किनकि आजसम्मको मानव इतिहास र प्रकृति यति कुरुप कहिलै भएको थिएन । तर, हामी आफूलार्ई आजसम्मकै सुन्दर भनेर दाबी गरिरहेका छौं । हामीले एकपटक आफूलाई निर्मम समिक्षाको भट्टिमा झोस्नु पर्छ ।
पक्कै पनि यी वास्तविक तथ्यहरुले हामीलाई झस्काउँछ । चिन्तन मनन् गर्ने अवस्थामा धकेल्छ । तथापि हामी दिशाविहीन बन्न पुग्छौं । हाम्रो मथिंगलमा यो संकटको समाधान सुल्झदैन । हरेस नखाऔं, नडराऔं–अवश्य यसको समाधान पनि हामी सँगै छ र यो समाधान वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवाद हो । यो दायित्व पक्कै पनि अन्य प्राणीको होइन । किनकि उनीहरु यो संकटका दोषी होइनन् ।
मान्छेलार्ई सर्वश्रेष्ठताको प्रमाणपत्र दिनेहरु अरु कोही होइनन् तिनीहरु सुनका दरवारमा बस्नेहरु हुन् । महँङ्गा हिराजडित पलङ्गमा सुत्नेहरु हुन् । व्यक्तिगतरुपमै सुपरजेट लिएर हिन्नेहरु हुन् । कृतिम वैभताको उच्चतम् सिंहासनमा बसेका आदेशकर्ता नाफाखोर, बजार नियन्त्रक लुटपाट गर्नेहरु हुन् । अहो ! हामी त्यही प्रमाणपत्र पाएर गद्गद् छौं पुलकित छौं । र, भनिरहेका छौं हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौं ।
अझै झुक्किरहनुभएको छ भने कृपया अब नझुक्किनु होला । सिंहासनबाट तल ओर्लनु होला र आम मानवहरुको भिडमा उभिएर आफूलार्ई मानव मात्र अथवा प्राणी मात्र ठान्नु होला । सर्वप्रथम हामी कथित सर्वश्रेष्ठताको प्रमाण पत्र जलाऔं । सर्वश्रेष्ठताको मुकुट निकालौं । सर्वश्रेष्ठ भएको अहंकारलार्ई तोडौं । सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन हाम्रो त्यहीँबाट शुरु हुनेछ ।
कसरी हामीले हाम्रा कमजोरी सच्याउन सक्छौं ? हाम्रो जीवन र हाम्रो सुदूरभविष्यलार्ई कसरी ठीक बनाउन सकिन्छ ? सबैको मनमा उब्जने सवाल यही हो । अवश्य हामी एक दुई जनाको, एक दुई राष्ट्रको वातावरणमैत्री र प्रयत्नमा मात्र यत्रो विश्वलार्ई जोगाउन सम्भव छैन । तर, अवश्य शुरुवात भने गर्न सक्छौं । वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादको स्थापनाको महान उद्देश्य राखेको क्रान्तिकारी पहल यसको शुरुवात हो । किनकि अबको मानव दुनियाँ पुँजीवादी वर्वरताको विरुद्धमा यही माक्र्सवादी सच्चाइमा ध्रुवीकृत हुँदैछ र समाधान माक्र्सवादमै छ ।
पृथ्वीलाई जोगाउने हामी विश्वभरिका सम्पूर्ण मानवजातिहरुको त्यो प्रारम्भ बिन्दु वैज्ञानिक समाजवाद हो । विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति र त्यसयताका निरन्तरका तीव्र औद्योगिकरण र उत्पादन करिब दुई सय बर्षहरुमा अझ खास गरेर बितेका ९०÷१०० बर्षयता पृथ्वीले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै भोग्नु नपरेको बिपत्ती भोगिरहेको छ । र, यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामहरुको चपेटामा मानिससहित सम्पूर्ण प्राणीहरु परिरहेका छन् । हामीले हाम्रो सर्वश्रेष्ठताको प्रमाणपत्रको वरिपरि विषाक्त बनेको प्राणी जीवनको चर्चा ग¥यौं, त्यो राजनीतिक हिसाबले पुँजीवादका कारण उत्पन्न भएको छ ।
पुँजीवाद नै यस्तो व्यवस्था हो जो सर्वश्रेष्ठता र आफ्नो कथित महानताको लागि दुनियाँलार्ई नष्ट गर्न समेत पछि पर्दैन । त्यसकारण सिंगो पृथ्वीको निम्ति पुँजीवाद भयानक दुश्मन बन्न पुगेको छ । यसका कयांै विकृतिहरु छन् । जसको जति नै चर्चा गरे पनि कम हुन्छ । हामीले यति स्पष्ट बुझौं पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालार्ई भत्काएर हामी वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गरौं वैज्ञानिक समाजवादले सर्वप्रथम ‘म’लाई ‘हामी’ बनाउने छ ।
यो हाम्रो अबको सर्वप्रथम कार्यभार हो । के यतिले हामीले माथि चर्चा गरेको भयानक संकटको समाधान गर्न सक्छ ? सवाल अवश्य उठ्यो होला । यतिले मात्र त्यो पर्याप्त हुँदैन, जवाफ यही हो । तर, यति मात्र हाम्रो बाँकी सबै कार्यभार भने अवश्य होइन । हाम्रो कार्यभार साम्यवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादमा सर्वप्रथम हामी हाम्रो सर्वश्रेष्ठताको अह्मतालार्ई तोड्न सक्षम हुनेछौं । सबैभन्दा शक्तिशाली भन्ने बिषय अवश्य हराउने छ ।
हामी, हाम्रो, साझा, सामुहिक, कम्युन संस्कृतिको बिकास गर्ने छौं । त्यतिबेला राष्ट्रहरुको आवश्यकता रहने छैन । पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती र वातावरणले हामीलार्ई पृथ्वी बचाउने साझा योजनामा प्रवृष्ट गर्न प्रेरित गर्नेछ । हामीले त्यतिबेला त्यो वस्तुगत वातावरणको उचित विश्लेषण गर्दै विश्वलार्ई एक हुन अपिल गर्नेछौं । त्यो साम्यवाद हो । साम्यवादले मात्र सारा विश्वलार्ई एक गर्न सक्छ । पृथ्वी बचाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
हो ! विश्वका ९९% जनता पुग्नलाई लालायित बनेको साम्यवादमा हामीले पृथ्वीमा पुनः कयौं बिरुवा रोप्ने छौं । युद्धको आवश्यकता नभएपछि अवश्य युद्ध क्षेत्रमा भएका लगानीहरुको आवश्यकता पर्ने छैन । मानवीय अहित र प्राणीविरुद्ध प्रयोग गर्न बनाइएका हतियार नष्ट गर्नेछौं । सामन्तवाद र निजी पुँजीवादले रचना गरेका मानव बस्न अयोग्य रहेका प्राकृतिक हिसाबले कष्टपूर्ण स्थानमा राष्ट्रहरुमामा बसोबास गरिरहेकाहरुलार्ई सुन्दर स्थानहरुमा स्थानान्तरण गर्नेछौं ।
यति सुन्दर सभ्यता कसरी सम्भव होला त ? कुराले मात्र हुन्छ ! मित्रहरुले यस्ता पागल तर्क, उडन्ते कल्पना भन्दै मनमनै सतही टिप्पणी गरिसक्नु भयो होला । तर, मित्रहरु के हामीसँग यस्तो सभ्यता निर्माण गरेर यो पृथ्वीको रक्षा गर्नुको विकल्प छ त ? हाम्रो सुदूरभविष्यलार्ई सुरक्षण प्रदान गर्ने हामी कुनै नवीन आविश्कार गरेर अर्को पुस्तालार्ई हस्तान्तरण गर्न सक्छौं ? कि उनीहरुले आफैं त्यस्तो आविष्कार गर्लान् ? प्रश्न मेरा मित्रहरुलार्ई राख्दै यसको पनि जवाफ दिने कष्ट म आफै उठाउँछु ।
प्रथम सवालको संक्षिप्त जवाफ– पृथ्वीको रक्षा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । र, दोस्रो जवाफ–वर्तमानमा सर्वश्रेष्ठताको जामा लगाएको पुँजीवादले विश्वका महान वैज्ञानिकहरुलार्ई दास बनाएको छ । वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरेका, उत्पादन र आविस्कार गरेका जुन कुनै वस्तु मानवीय हितका लागि एकदमै कम मात्रमा प्रयोग भएका छन् । अथवा तीनलार्ई नियन्त्रणमा लिएर पुँजीवाद तिनै आविष्कार र उत्पादनको माध्यमबाट आफ्नो राजनीति सञ्चालन गरिरहेको छ । व्यापार गरिरहेको छ । त्यसैको आडमा हामीलार्ई सर्वश्रेष्ठ प्राणीको उपहार समेत दिइरहेको छ । पहिलो कुरा विज्ञानलाई पुँजीपतिहरुको जेलबाट बाहिर निकाल्नु पर्दछ र त्यसलार्ई पृथ्वी र प्राणी हितमा लगाउनु पर्दछ ।
त्यसकारण मित्रहरु, सर्वप्रथम विश्व पुँजीवादको अमानवियता, प्रकृतिविरुद्धता, प्राणी जगत कै चुनौतीको रुपमा रहेको भयानक स्वरुपलार्ई एउटा खराब इतिहास बनाउन वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नैपर्छ । र, त्यहाँबाट हामी विश्व साम्यवादमा पुग्नै पर्छ । यसको अलवा अब हामीसँग बाँच्न सक्ने त्यस्तो कुनै उपाय छैन । यसलार्ई कुनै कल्पनाहरुको लेपन लगाएर, कुनै साधुसन्तले प्रबचन भनेर, कोही योगी सन्यासीको साधारण कम्युनले अथवा हाम्रो याचनाले, चाहानाले, कसैको आशीर्वादले, मन्दिरको आराधनाले यो हाम्रो भयंकर वर्तमान र महाविस्फोटको नजिक रहेको हाम्रो भविष्यलार्ई सच्याउन सक्ने छैन ।
त्यसको निम्ति राजनीतिकरुपले नेतृत्वमा रहेको विश्व पुँजीवादी शिविरविरुद्ध हामीले संघर्ष गर्नैपर्छ । जसरी हामीले सामन्तवादविरुद्ध संघर्ष ग¥यौं त्यसैगरी वर्तमान दलाल पुँजीवादविरुद्ध भौतिक संघर्ष गरेर मात्र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । ‘म’ लाई ‘हामी’ बनाउन सकिन्छ । यसको निम्ति विश्वभरि नै प्रसस्तै सचेत पहलहरु भइरहेका छन् । पुँजीवाद सबैभन्दा धेरै समाजवाद साम्यवादसँग कापिरहेको छ ।
हामी सत्यमा प्रवेश गरौं । वस्तुगत र यथार्थ कुराहरुको आत्मासात गरौं । हामीले आफूबाट शुरु गरौं । आफूलार्ई बुझौं, आफ्नो इतिहासलार्ई बुझौं ४० लाख बर्ष पहिलेका हाम्रा पुर्खा पिरोलापिथेकस–मानवको पहिलो पाइला राख्ने अर्डीपिथेकस रेमीडस– २३ लाख बर्ष पहिले दिमाग विकसित भएपछिका होमो ह्याबीलीस– समूहमा सिकार गर्ने होमो इरेक्टस– एक लाख बर्ष अगाडिका हामोसेपीयन्स– ३० हजार बर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो मानवीय सभ्यताको खोजी हुँदै अहिले आफू भएर उभिँदासम्मको अवस्थालाई हेरौं । खाली हजुरबुवा जीवासम्म मात्र होइन ४० लाख बर्षयताको हाम्रो जीवनको विकासक्रम खोजौं । र, भविष्यलाई उचित दिशा प्रदान गरौं त्यो साम्यवाद हो ।
Previous articleबिर्तामोडका विद्यालय असोज ४ बाट खुल्ने
Next articleउत्तरी नाकामा अझै अवरोध